एसिया कपमा रोमाञ्चक भिडन्तः भारत भर्सेस पाकिस्तान, अफगानिस्तान भर्सेस बंगलादेश ! - Everest Dainik - News from Nepal
एसिया कपमा रोमाञ्चक भिडन्तः भारत भर्सेस पाकिस्तान, अफगानिस्तान भर्सेस बंगलादेश !
काठमाडौं, असोज ७ । यूएइमा जारी एसिया कप क्रिकेटमा आज (आइतबार) सुपर फोर अन्तर्गतका दोस्रो खेल हुँदैछन् । एसिया कपमा सहभागि ६ टिममध्ये भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान सुपर फोरमा एक अर्कासँग भिड्न लागेका हुन् ।
जस अन्तर्गत आज भारत र पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान र बंगलादेश भिड्न लागेका छन् । सुपर फोर अन्तर्गत पहिलो खेलमा भारतले बंगलादेश तथा पाकिस्तानले अफगानिस्तानलाई पराजित गरेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस सन्दीपसहित २० स्टार क्रिकेटर, जो विश्वकपमा देख्न पाइने छैन
आजको खेलमा भारत र पाकिस्तान मध्य एउटा टिम विजयी भए फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो हुनेछ । दुवै टिमले पहिलो सुपर फोरमा विजयी भएकाले आजको खेलको नतिजाले फाइनल यात्रा सहज हुने छ ।
ट्याग्स: Afaganstan vs Bangldesh, Asaia Cup, Cricket, Pakistan Vs India, UAE